‘Zvinhu Izvi Zvipe Varume Vakatendeka’—2 Timoti 2:2 | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Zvinhu izvi zvipe [varume] vakatendeka, avo vachanyatsokwanisawo kudzidzisa vamwe.”—2 TIM. 2:2.
NZIYO: 123, 53
Mambo Dhavhidhi akaita sei paakaudzwa kuti mwanakomana wake aizovaka temberi yaMwari?
Nei vanhu vakura vachifanira kubatsira vechidiki kuti vazoita mamwe mabasa?
Varume vechidiki vangaratidza sei mafungiro akanaka pavanotanga kuita mabasa aiitwa nehama dzakura?
1, 2. Vanhu vakawanda vanoona sei mabasa avo?
VANHU vakawanda vanofunga kuti mabasa avanoita ndiwo anoratidza kuti vanokosha zvakadini. Mune dzimwe tsika, munhu paanenge achida kuzivana nemumwe, chimwe chaanowanzotanga kubvunza ndechekuti, “Unoita basa rei?”
2 Vamwe vanhu vari muBhaibheri vanorondedzerwa nemabasa avaiita. Semuenzaniso, Bhaibheri rinotaura ‘nezvaMateu muteresi’; “Simoni, musukuti wematehwe”; uye “Ruka, chiremba anodiwa.” (Mat. 10:3; Mab. 10:6; VaK. 4:14) Vamwe vaizivikanwawo nemabasa avaiita pakunamata. Tinoverenga nezvaMambo Dhavhidhi, muprofita Eriya, uye muapostora Pauro. Varume ava vaikoshesa mabasa avakapiwa naMwari. Kana tiine mabasa atinoita musangano, tinofanira kuakoshesawo.
3. Nei vanhu vakura vachifanira kudzidzisa vechidiki? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
3 Vakawanda vedu tinoda mabasa atinoita musangano uye tinoda kuramba tichiaita kweupenyu hwese. Asi zvinosuwisa kuti vanhu pavanokwegura havazokwanisi kuita zvose zvavaimboita vachiri vadiki. (Mup. 1:4) Izvi zviri kuita kuti zvimwe zvinhu zviomere vaKristu vechokwadi mazuva ano. Basa rekuparidza riri kuramba richiwedzera, uye sangano raJehovha riri kushandisa zvigadzirwa zvemazuva ano kuti vakawanda vawane mashoko akanaka. Vamwe vanhu vakura vangaomerwa nekufambirana nezvinhu zvitsva izvi. (Ruka 5:39) Kunyange vakasaomerwa, vanhu vakura havana simba rakafanana nerine vechidiki. (Zvir. 20:29) Saka zvinobatsira kuti vaya vakura vadzidzise vechidiki kuti vazoita mabasa akakura. Izvozvo zvinoratidzawo rudo.—Verenga Pisarema 71:18.
4. Nei zvichiomera vamwe kuti vape vamwe mabasa ekuita? (Ona bhokisi rakanzi “Chii Chinoita Kuti Vamwe Vasada Kupa Vamwe Mabasa?”)
4 Vaya vari kutungamirira vangaona zvisiri nyore kuti vape vechidiki mabasa ekuita. Vamwe vanotya kurasikirwa nemabasa avanofarira musangano. Vamwe vanonetseka kuti kana vasiri kutungamirira, basa racho hariitwi zvakanaka. Vamwewo vanoti havana nguva yekudzidzisa vamwe. Asiwo vaya vanenge vachiri vadiki vanofanira kuva nemwoyo murefu kana vasati vapiwa mamwe mabasa ekuita.
5. Mibvunzo ipi yatichakurukura munyaya ino?
5 Ngatitarisei zvinhu zviviri panyaya iyi yekupa vamwe mabasa ekuita. Kutanga, vanhu vakura vangabatsira sei vechidiki kuti vazoita mamwe mabasa uye nei izvi zvichikosha? (2 Tim. 2:2) Chechipiri, nei zvichikosha kuti vechidiki varambe vaine mafungiro akanaka pavanobatsira hama dzagara nebasa, vodzidza kubva kwadziri? Ngatitangei nekuona kuti Mambo Dhavhidhi akabatsira sei mwanakomana wake kuti azoita basa raikosha.
DHAVHIDHI AKATSIGIRA SOROMONI
6. Mambo Dhavhidhi aida kuitei, asi Jehovha akatii?
6 Pashure pemakore akawanda achitiza kuurayiwa, Dhavhidhi akava mambo, ndokugara muimba yakanaka. Asi ainetseka kuti paisava ‘neimba,’ kana kuti temberi yakatsaurirwa kuna Jehovha, saka aida kuivaka. Akati kumuprofita Natani: “Tarirai ini ndiri kugara muimba yemisidhari, asi areka yesungano yaJehovha iri mumachira etende.” Natani akapindura kuti: “Itai zvose zviri mumwoyo menyu, nokuti Mwari wechokwadi anemi.” Asi hazvisirizvo zvaidiwa naJehovha. Akaudza Natani kuti anoudza Dhavhidhi kuti: “Hausi iwe uchandivakira imba yokuti ndigare.” Kunyange zvazvo Jehovha akavimbisa Dhavhidhi kuti aizomukomborera, akarayira kuti mwanakomana waDhavhidhi, Soromoni, avake temberi yacho. Dhavhidhi akaita sei nazvo?—1 Mak. 17:1-4, 11, 12; 29:1.
7. Dhavhidhi akaita sei nezvakasarudzwa naJehovha?
7 Dhavhidhi haana kubva arega kutsigira Soromoni achirwadziwa kuti temberi yacho yaizonzi yakavakwa naSoromoni kwete naiye. Chivako chacho chakatozozivikanwa setemberi yaSoromoni kwete yaDhavhidhi. Kunyange zvazvo Dhavhidhi aigona kunge akaora mwoyo kuti haana kukwanisa kuzadzisa zvaidiwa nemwoyo wake, akatsigira basa racho nemwoyo wese. Akaronga mapoka aizoita basa racho uye akaunganidza simbi, mhangura, sirivha, goridhe pamwe chete nematanda emisidhari. Akakurudzirawo Soromoni, achiti: “Zvino, mwanakomana wangu, Jehovha ngaave newe, ubudirire, uvake imba yaJehovha Mwari wako, sezvaakataura pamusoro pako.”—1 Mak. 22:11, 14-16.
8. Nei Dhavhidhi angangodaro akafunga kuti Soromoni aisakwanisa kuita basa raakapiwa, asi Dhavhidhi akaita sei?
8 Verenga 1 Makoronike 22:5. Dhavhidhi anogona kunge akafunga kuti Soromoni aisakwanisa kutungamirira basa raikosha kudaro. Panguva iyoyo, Soromoni ainge achiri ‘muduku uye asina simba’ asi temberi yacho yaizova “huru kwazvo.” Kunyange zvakadaro, Dhavhidhi aiziva kuti Jehovha aizobatsira Soromoni kuti aite basa iri. Saka akaita zvaaikwanisa kuita kuti amubatsire. Akaunganidza zvinhu zvakawanda zvaizoshandiswa pakuvaka.
WANA MUFARO UNOBVA PAKUDZIDZISA VAMWE
Zvinofadza kuona vechidiki vachiita mabasa akakura (Ona ndima 9)
9. Hama dzakura dzingawana sei mufaro padzinosiyira vechidiki mabasa adzaimboita? Taura muenzaniso.
9 Hama dzakura hadzifaniri kunetseka kana kuora mwoyo kana yava nguva yekuti dzisiyire hama dzechidiki mabasa adzaimboita. Basa raJehovha rinoramba richifambira mberi kana vechidiki vakadzidziswa kuita mamwe mabasa. Varume vakagadzwa vanofara zvikuru pavanoona vechidiki vavakadzidzisa vava kukwanisa kuita mabasa acho. Semuenzaniso, funga nezvababa vanodzidzisa mwanakomana wavo kutyaira motokari. Paanenge achiri mudiki, mwana wacho anocherechedza zvinenge zvichiitwa nababa vake. Kana ati kurei, baba vanomutsanangurira zvavanenge vachiita. Paanozosvika pazera rinobvumirwa nemutemo, anotanga kutyaira baba vake vachimudzidzisa zvimwe. Dzimwe nguva vanogona kuita vachichinjana, asi pakupedzisira mwanakomana ndiye anenge ava kutyaira kakawanda, kana kuti ndiye anotozogara achityaira sezvo baba vake vanenge vakura. Baba vacho vanofara mwanakomana wavo paanenge ava kugara achityaira uye havaoni sekuti zvese zvinofanira kuramba zviri mumaoko avo. Saizvozvowo, varume vakura vanofara kana vakadzidzisa vechidiki kuti vazoita mamwe mabasa musangano.
10. Mosesi aiona sei nyaya yekukudzwa uye kuva nesimba?
10 Vanhu vakura vanofanira kudzivisa kuva negodo. Ona kuti Mosesi akaita sei vamwe vaiva mumusasa wevaIsraeri pavakatanga kuita sevaprofita. (Verenga Numeri 11:24-29.) Joshua, mubatsiri waMosesi, aida kuvarambidza. Anofanira kunge akafunga kuti vaiita kuti Mosesi asaonekwa semunhu anokosha uye ane simba. Asi Mosesi akapindura kuti: “Uri kunzwa godo nokuda kwangu here? Aiwa, ndaizoda kuti dai vanhu vose vaJehovha vaiva vaprofita, nokuti Jehovha aizoisa [mweya] wake pavari!” Mosesi akaona kuti Jehovha ndiye akanga achitungamirira. Pane kuti atsvage kukudzwa, Mosesi akaratidza kuti aiva nechido chekuti vashumiri vose vaJehovha vavewo nezvipo zvemweya zvakadaro. Sezvakaitwa naMosesi, vanhu vakura vanofara vamwe pavanopiwa mabasa angangodaro aizopiwa ivo.
11. Imwe hama yakatii nezvekusiya basa rayaimboita?
11 Mazuva ano, tine mienzaniso yakawanda yehama dzakashanda nesimba kwemakore uye dzakadzidzisa vamwe kuti vazoita mamwe mabasa. Semuenzaniso, imwe hama inonzi Peter yakaita makore 74 iri mubasa renguva yakazara, uye 35 acho yaishanda pane rimwe bazi reZvapupu zvaJehovha kuEurope. Kwemakore akawanda, yakashanda semutariri mudhipatimendi rebasa. Iye zvino, imwe hama yechidiki inonzi Paul, iyo yakashanda naPeter kwemakore akawanda ndiyo yava mutariri. Paakabvunzwa kuti ainzwa sei nezvekusiya kwaakaita basa rake, Peter akapindura kuti: “Ndinofara kuti pane hama dzakadzidziswa kuti dzizoita mabasa akakura uye dziri kuita mabasa aya zvakanaka.”
KOSHESA VANHU VAKURU VATIINAVO
12. Tinodzidzei panyaya yemuBhaibheri yaRehobhoamu?
12 Soromoni paakafa, mwanakomana wake Rehobhoamu akava mambo. Paaida mazano ekuti angatonga sei, Rehobhoamu akatanga abvunza varume vakuru. Asi haana kuvateerera. Akasarudza kuteerera mazano evechidiki vaakakura navo vakanga vava kumushandira. Izvi zvakaita kuti zvinhu zvimuipire. (2 Mak. 10:6-11, 19) Tinodzidzei pane zvakaitwa naRehobhoamu? Kana tikateerera mazano evanhu vakuru, tinenge tichiratidza uchenjeri. Kunyange zvazvo vechidiki vasingafaniri kuona sekuti vanotosungirwa kutevedzera maitirwo aiitwa zvinhu kare, havafaniri kukurumidza kuramba mazano avanopiwa nevanhu vakuru.
13. Hama dzechidiki dzingashanda sei pamwe chete nehama dzakura?
13 Dzimwe hama dzechidiki dzinogona kunge dzava kutungamirira pamabasa anoitwawo nehama dzakura uye dzine ruzivo rwakawanda. Kunyange zvakadaro, hama dzechidiki idzi dzinogona kushandisa mazano anobatsira anopiwa nehama dzakura pakuita zvisarudzo. Paul, ambotaurwa nezvake, uyo akatsiva Peter semutariri werimwe dhipatimendi paBheteri akati, “Ndaitsvaga mazano kuna Peter, uye ndaikurudzira vamwe mudhipatimendi redu kuti vaitewo saizvozvo.”
14. Kushanda kwaiita Timoti naPauro pamwe chete kunotidzidzisei?
14 Timoti, uyo aiva hama yechidiki, akashanda naPauro kwemakore akawanda. (Verenga VaFiripi 2:20-22.) Pauro akanga anyorera vaKorinde achiti: “Ndiri kukutumirai Timoti, zvaari mwana wangu anodiwa uye akatendeka munaShe; uye iye achakuyeuchidzai nezvenzira dzangu pamusoro paKristu Jesu, sokudzidzisa kwandiri kuita kwose kwose muungano dzose.” (1 VaK. 4:17) Mashoko aya anoratidza kuti Pauro naTimoti vaishanda pamwe chete zvakanaka. Pauro akawana nguva yekudzidzisa Timoti ‘nzira dzake pamusoro paKristu Jesu.’ Timoti akabvuma kudzidziswa uye izvi zvakaita kuti Pauro amude, uye Pauro aiva nechivimbo chekuti Timoti aizobatsira ungano yaiva muKorinde pakunamata. Vakuru vanogona kutevedzera muenzaniso uyu wakanaka sezvavanodzidzisa hama dzechidiki kuti dzizotungamirira muungano.
TESE TINE ZVATINOFANIRA KUITA
15. Tingabatsirwa sei nezano raPauro raakapa vaKristu vaiva muRoma kana basa redu rikachinja?
15 Tiri kurarama munguva iri kuitika zvinhu zvakawanda. Chikamu chepanyika chesangano raJehovha chiri kukura, asi kukura uku kunoita kuti zvimwe zvinhu zvichinje. Sezvo kuchinja kunoita zvimwe zvinhu kuchitibata-bata, ngatizvininipisei, tichifunga zvinodiwa naJehovha kwete zvatinoda isu pachedu. Izvozvo zvinoita kuti pave nekubatana. Pauro akanyorera vaKristu vaiva muRoma kuti: “Ndinoudza munhu wose ari pakati penyu kuti arege kufunga nezvake kupfuura zvaanofanira kufunga; asi kuti afunge kuitira kuti ave nepfungwa dzakanaka, mumwe nomumwe sokugoverwa kwaakaitwa chiyero chokutenda naMwari. Nokuti zvatiine nhengo zhinji pamuviri mumwe chete, asi nhengo imwe neimwe haina basa rakafanana, naizvozvo isu, kunyange tiri vazhinji, tiri muviri mumwe chete uri pamwe naKristu.”—VaR. 12:3-5.
16. Varume vakura nevechidiki, pamwe chete nemadzimai avo, vangabatsira sei kuti musangano raJehovha murambe muine rugare nekubatana?
16 Pasinei nekuti zvinhu zvakamira sei, tose ngatishandei nesimba kuti titsigire zvinhu zvine chekuita neUmambo hwaJehovha. Imi vakura, dzidzisai vechidiki kuti vazoita mabasa amuri kuita. Imi hama dzechidiki, bvumai kuita mabasa amunopiwa, ivai nemwero, uye rambai muchiremekedza vakuru kwamuri. Uye imi madzimai, tevedzerai muenzaniso wemudzimai waAkwira, Prisira, uyo aitsigira murume wake paichinja zvinhu muupenyu hwavo.—Mab. 18:2.
17. Jesu aiva nechivimbo chekuti vadzidzi vake vaizoitei, uye akavadzidzisei?
17 Jesu ndiye muenzaniso mukuru panyaya yekudzidzisa vamwe kuti vazoita mamwe mabasa. Aiziva kuti kana adzokera kudenga, vamwe vaizosara vachienderera mberi nebasa rake. Kunyange zvazvo vadzidzi vake vaiva vanhu vane chivi, aiva nechivimbo chekuti vaizoita mabasa makuru kupfuura aakaita. (Joh. 14:12) Akanyatsovadzidzisa kuita basa rekuparidza mashoko akanaka, uye vakariita munyika yose.—VaK. 1:23.
18. Tine tariro ipi yeramangwana, uye tingaitei parizvino?
18 Paakafa, Jesu akamutswa ndokuenda kudenga kwaakapiwa rimwe basa nesimba riri ‘pamusoro pehurumende dzose nechiremera nesimba noushe.’ (VaEf. 1:19-21) Kana tikafa takatendeka Amagedhoni isati yasvika, tichamutswa topinda munyika itsva muchange muine mabasa akawanda anogutsa. Asi parizvino, tese tine basa rinokosha ratinogona kuita, basa rekuparidza mashoko akanaka uye kuita kuti vanhu vave vadzidzi. Tese zvedu, tingava vadiki kana vakuru, ngatirambei ‘tiine zvizhinji zvokuita mubasa raShe.’—1 VaK. 15:58.
CHII CHINOITA KUTI VAMWE VASADA KUPA VAMWE MABASA?
Vanotyira kuti havasi ivo vanozorumbidzwa kana basa racho raitwa.
Asi Jehovha ndiye anofanira kurumbidzwa pazvose.—Pis. 115:1.
Havadi kusiya basa ravanofarira.
Asi kudzidzisa vamwe kunounza mufaro.—Mab. 20:35.
Vanotyira kuti basa racho harizoitwi nemazvo.
Asi Mwari anogona kubatsira vamwe kuti vaite basa racho.—Pis. 37:5.
Vanoda kuramba vachitungamirira zvinhu.
Asi zvakanaka kubvuma kuti Jehovha ndiye ari kutungamirira.—Isa. 45:6, 7.
Vanofunga kuti havana nguva yekudzidzisa vamwe.
Asi kudzidzisa vamwe kunotochengetedza nguva mune remangwana.—VaEf. 5:15, 16.